Ballet TUTU goonnada ayaa muujin kara dhaqdhaqaaqa qoob-ka-ciyaarka - Warka - Shenzhen Wudongfang Dhaqanka Isgaarsiinta Co., Ltd.
Hoyga > Wararka > Wararka shirkadda > Balet TUTU goonnada ayaa tusi kara dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka
Balet TUTU goonnada ayaa tusi kara dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka
Balet Tutugoonnada waa goonnada qoob-ka-ciyaarka ugu caansan ee baleedka caadiga ah. Waxaa lagu gartaa goonno aad u gaaban, oo laga soo dhejiyay dhexda si ay ugu fududaato dhagaystayaashu inay ku qancaan qoob-ka-ciyaarka dhaqdhaqaaqa lugta leh ee quruxda badan iyo qaabka lugta leh ee quruxda badan. Riwaayaddii Harada, Tutu waxaa ku dhawaaday inuu heer sare gaaro. Goor dambe, markay dadku ka hadlayaan ballet, waxay ku tusi lahaayeen qoob-ka-ciyaarka inuu xiran yahay Tutu iyo kabo cirif leh, taas oo muujinaysa guusheeda.
Tutu waxaa laga sameeyay dun adag oo qaas ah, taas oo loo qaybiyay Tutu oo lagu tababarto iyo Tutu oo loogu talagalay waxqabadka. Farqiga u dhexeeya labadoodaba badanaa waa tirada xargaha. Midka hore waxaa badanaa loo isticmaalaa ku-dhaqanka, sidaa darteed dunta guud waa mid aad u yar, halka tan dambe guud ahaan ay muujineyso gabadha quruxdeeda ama nimcadeeda, waxayna guud ahaan isticmaashaa in ka badan lix lakab oo dun ah, oo u muuqda inay lakab yihiin, halkii ay ka ahaan lahayd mid adag Tutu.
Intaa waxaa sii dheer, Tutu badanaa waxay lahaan doontaa dusha sare ee u dhigma oo toos ugu xiran Tutu, halka Tutu sida caadiga ah ay tahay goonno qoob-ka-cayaar oo gooni ah. Iyadoo aan la helin dusha sare, waxaa kaliya lagu dhejin karaa dharka tababarka. Sida Tutu iyo nigis. Iyadoo ama aan lahayn labo surwaal ah (Tutu waa nigis isku xiran), sababtoo ah dharka jimicsiga ee isku habboon, ma jiro farqi u dhexeeya labadaas, kaliya arrin shakhsiyeed.
Hore:Heerka dharka baletiga
Xiga:Waxaan kuu sheegayaa shaqada dharka baleyda